Magaalooyinka Diinsor iyo Baardhere ayaa maanta waxaa booqday Taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM Gen, Zeyinu – STAR FM SOMALIA
Taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM Gen, Mohammedesha Zeyinu ayaa booqday magaalooyinka Baardheere iyo Diinsoor ee gobolada Gedo iyo Bay.
Booqashada taliye ku xigeenka oo la xiriirtay sidii uu ogaan lahaa xaaladaha ka jira degmooyinka Baardhere iyo Diinsoor oo ka mid ah degmooyinkii ugu dambeeyay ee ay ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada la wareegeen.
Maj. Gen. Mohammedesha Zeyinu ayaa ku amaanay ciidamada AMISOM howlgalada ay ka fuliyeen degmada Baardheere oo muddo dheer ay gacanta ku hayeen ururka Alshabaab.
“Howlgalada aad dib ugu qabsateen magaalada Baardheere waxa ay u tahay astaan ifeysa xooggaga AMISOM, guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo caalamka oo idil waa ay ogyihiin howsha wanaagsan ee aad qabateenm sidaa darteed waa idinkaga mahadcelinayaa howlaha aad qabateen,”ayuu yiri.
Sidoo kale taliye ku xigeenka AMISOM oo booqday magaalada Diinsoor ayaa ka codsaday ciidamada ku sugan inay si wanaagsan ula shaqeeyaan shacabka isla markaana ay sii kordhiyaan dadaalada ay ka wadaan dalka Soomaliya.
“Ujeeddada howlgalkeenna Somalia waa inaan ka adkaanno oo aan cirib-tirno Al-shabaab, si aan dib ugu soo celinno nabadda iyo deggenaashaha dalka Somalia, gobolka iyo weliba qaaradda oo dhan, maxaa yeelay cadowgani waxay cadow ku yihiin; dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan Bariga Afrika. Markii aan cirib-tirno cadowgan ayaan awoodi karnaa inaan xaqiijinno xasilloonida Soomaaliya iyo tan gobolka oo dhan. Arrintuna waa mid cad oo aad ogtihiin, waayo halkan kama jirin nabad, xasillooni iyo horumar, xaalkuna mar walba way kasii darayay,” ayuu yiri Jen. Mohammedesha.
Ciidanka AMISOM iyo kuwa maamulka ka jira goboladan ayaa waxay dadaalo ugu jiraan sidii ay u adkeyn lahaayeen amniga deegaannadii Al-shabaab laga saaray, iyagoo shacabka ku boorriya inay lasoo socodsiiyaan wax walba oo ay u arkaan inay khatar ku yihiin oo ka imaanaya dhanka Al-shabaab.